ट्राफिक नियम पालना नहुँदा बढे दुर्घटना - NepalKhoj
नेपालखोज २०७६ कार्तिक १९ गते ८:१५
१९ कार्तिक, काडमाडाैं । नेपालीका लागि महत्त्वपूर्ण चाडबाडका बेला ‘भयानक तथा पीडादायी’ सवारी दुर्घटना नियतिजस्तै भएका छन् । यस वर्षको दशैँ, तिहार, नेपाल संवत् र छठ पर्व त्यस्ता दुर्घटनाबाट अछूतो रहन सकेनन् ।
सिट क्षमताभन्दा बढी यात्रु बोक्दा भार थाम्न नसकी, ‘ब्रेकफेल’ भएर बारम्बार यस्ता दुर्घटना हुने गरेको दाबी प्रहरी अधिकारीको छ । यी दुई घटना हुनुभन्दा चार दिनअघि मेलम्चीबाट काठमाडौँ फर्किंदै गरेको बा. ५ ख ५०७० नम्बरको बस साँखुमा दुर्घटना भएको थियो ।उक्त दुर्घटनामा तीन जनाको मृत्यु र २४ जना घाइते भए । दशैँ र तिहार मनाएर फर्किंदै गरेका यात्रुले खचाखच भरिएको बस सिन्धुपाल्चोक–काठमाडौंँ सीमा जरसिंहपौवाको ओरालोमा भारी लोडका कारण चिप्लिएर पल्टिँदा यतिको क्षति भएको प्रहरीको अनुसन्धानले देखाएको हो । सो दुर्घटना भएको २४ घण्टा नबित्दै महेन्द्रनगरबाट बाजुरा जाँदै गरेको महाकाली यातायातको ना. ७ ख ६१८१ नम्बरको बस डोटीको शिखर नगरपालिका गेरुपानीमा शनिबार बिहान दुर्घटना हुँदा एक जनाको मृत्यु ३४ जना घाइते भएका छन् ।
केन्द्रीय प्रहरी प्रवक्ता विश्वराज पोखरेल दुर्घटनाका विभिन्न कारणमध्ये चालक र यात्रुको लापरबाही मुख्य देखिएको बताउछन् । चालकलाई पैसा कमाउनुपर्ने, यात्रुलाई गन्तव्य नपुगी नहुने भएकाले ‘ओभरलोड’का कारण पनि बस दुर्घटना हुने गरेको उनले स्पष्ट पारे ।
चाडबाडको बेला ट्राफिक नियम पालना नहुँदा दुर्घटना बढेको महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखा प्रमुख भीमप्रसाद ढकालको भनाइ छ । “चालक मात्र के, कतिपय सचेत नागरिक पनि सवारी नियमको वास्ता गर्दैनन”, उनले थप्नुभयो, “सवारी साधनको अवस्थादेखि चालकको लापरबाही र यात्रु सचेत नभइदिँदा यस्ता दुर्घटना हुने गरेका हुन् । ” याे समाचार अाजकाे गाेरखापत्र दैनिकले छापेकाे छ ।